Lioka 7 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
7 Niditra tao Kapernaomy+ i Jesosy, rehefa vitany teo anatrehan’ny olona izany teny rehetra izany. 2 Ary nisy manamboninahitra nanana mpanompo tena tiany. Narary efa ho faty anefa ilay mpanompo.+ 3 Koa rehefa nandre ny amin’i Jesosy ilay manamboninahitra, dia naniraka anti-panahin’ny Jiosy ho any amin’i Jesosy, mba hangataka azy ho avy ka hanasitrana an’ilay mpanompo. 4 Niangavy mafy an’i Jesosy àry ireo olona tonga tany aminy, ka nanao hoe: “Mendrika ny hanaovanao izany izy, 5 satria tia ny firenentsika+ izy sady nanorina synagoga teto.” 6 Nandeha niaraka tamin’ireo àry i Jesosy. Ary rehefa tsy lavitra an’ilay trano izy, dia nisy naman’ilay manamboninahitra efa nirahiny hilaza taminy hoe: “Aza misahirana mankatỳ amiko, tompoko, fa tsy mendrika ny handray anao ao ambany tafontranoko aho.+ 7 Izany no antony nieritreretako hoe tsy mendrika hankeny aminao aho. Fa mitenena fotsiny, dia ho sitrana ny mpanompoko. 8 Fa izaho koa mba eo ambany fahefan’olona, sady manana miaramila eo ambany fahefako. Koa raha miteny amin’ny anankiray aho hoe: ‘Mandehana!’, dia lasa izy, ary amin’ny anankiray kosa hoe: ‘Avia!’, dia tonga izy, ary amin’ny mpanompoko hoe: ‘Ataovy ity!’ dia ataony izany.”+ 9 Ary gaga i Jesosy nahare izany teniny izany, dia nitodika tany amin’ny vahoaka nanaraka azy, ka nanao hoe: “Lazaiko aminareo fa mbola tsy nahita finoana lehibe toy izany aho, na teo amin’ny Israely aza.”+ 10 Dia nody tany an-trano ireo iraka ireo ka nahita fa efa salama ilay mpanompo.+ 11 Taoriana kelin’izay, dia nankany amin’ny tanàna atao hoe Naina izy, ary nisy vahoaka be niara-dia taminy, ankoatra ny mpianany. 12 Rehefa nanakaiky ny vavahadin’ny tanàna izy, dia nisy faty+ nentina nivoaka, izay zanaka lahitokan-dreniny,+ ary efa mpitondratena koa ravehivavy. Ary nisy vahoaka be avy ao an-tanàna niaraka tamin-dravehivavy. 13 Raha vao nahita azy ny Tompo, dia nangoraka+ azy ka nanao taminy hoe: “Aza mitomany intsony.”+ 14 Dia nanatona izy ka nikasika an’ilay filanjana faty ary nijanona ny mpilanja. Koa hoy izy: “Ry tovolahy, hoy aho aminao: Miarena!”+ 15 Dia niarina ny maty ary nanomboka niteny, ka natolotr’i Jesosy an-dreniny.+ 16 Ary raiki-tahotra+ ny rehetra ka nanome voninahitra an’Andriamanitra nanao hoe: “Mpaminany+ lehibe no efa mitsangana eto amintsika”, sy hoe: “Mitsinjo ny vahoakany Andriamanitra.”+ 17 Dia niely eran’i Jodia sy ny faritra rehetra manodidina izany vaovao momba azy izany. 18 Nanambara izany rehetra izany tamin’i Jaona ny mpianany.+ 19 Koa niantso anankiroa tamin’ny mpianany i Jaona ka naniraka azy tany amin’ny Tompo mba hilaza hoe: “Ianao ve Ilay ho avy, sa hafa no tokony handrasanay?”+ 20 Rehefa tonga tany aminy ireo, dia nanao hoe: “Nirahin’i Jaona Mpanao Batisa izahay hanontany anao hoe: ‘Ianao ve Ilay ho avy, sa hafa no tokony handrasanay?’” 21 Tamin’izay ora izay i Jesosy dia nanasitrana olona maro tsy salama+ sy azon’aretina nampijaly ary nisy fanahy ratsy. Nampahiratra jamba maro koa izy. 22 Koa namaly azy roa lahy izy hoe: “Mandehana,+ lazao amin’i Jaona izao hitanareo sy renareo izao: Mahiratra ny jamba,+ mandeha ny malemy, voadio ny boka, mandre ny marenina, atsangana ny maty, ary itoriana ny vaovao tsara ny mahantra.+ 23 Ary sambatra izay tsy tafintohina noho ny amiko.”+ 24 Nony lasa ireo irak’i Jaona, dia izao no nolazainy tamin’ny vahoaka, momba an’i Jaona: “Hijery inona no nivoahanareo nankany an-tany efitra? Bararata ahetsiketsiky ny rivotra ve?+ 25 Sa hijery inona no nivoahanareo? Olona manao akanjo vita tamin’ny ravin-damba malefaka ve?+ Any an-tranon’ny mpanjaka no misy manao akanjo mirenty sy miaina ao anatin’ny renty!+ 26 Hijery inona tokoa anefa no nivoahanareo? Mpaminany+ ve? Eny, lazaiko aminareo fa mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy.+ 27 Fa izao no voasoratra momba azy: ‘Hirahiko mialoha anao ny irako,+ izay hanomana ny lalanao eo alohanao.’+ 28 Lazaiko aminareo fa amin’izay natera-behivavy, dia tsy misy lehibe noho+ i Jaona. Izay kely indrindra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra anefa dia lehibe noho izy.”+ 29 Rehefa nandre izany ny olona rehetra sy ny mpamory hetra, dia nanambara fa marina+ Andriamanitra. Natao batisa tamin’ny batisan’i Jaona mantsy izy ireo.+ 30 Fa ny Fariseo sy ireo nahay Lalàna kosa tsy niraharaha ny sitrapon’Andriamanitra+ momba azy ireo, ka tsy nataon’i Jaona batisa. 31 “Hohariko amin’iza ny olona amin’ity taranaka ity? Ary toa an’iza izy?+ 32 Toy ny ankizy mipetraka eny an-tsena, izay mifampiantsoantso hoe: ‘Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo. Efa nidradradradra izahay, nefa tsy nitomany ianareo.’+ 33 Toy izany koa fa tonga i Jaona Mpanao Batisa, tsy nihinana mofo na nisotro divay, nefa hoy ianareo: ‘Misy demonia izy.’+ 34 Tonga kosa ny Zanak’olona, nihinana sy nisotro, nefa hoy ianareo: ‘Olona tendan-kanina sy mpiboboka divay izy, sady naman’ny mpamory hetra sy ny mpanota!’+ 35 Ny fahendren’ny+ olona anefa dia hamarinin’ny zanany* rehetra.”+ 36 Ary nanasa azy foana hiara-misakafo taminy ny Fariseo iray. Koa niditra tao an-tranon’ilay+ Fariseo izy ary nandry ilika hisakafo. 37 Ary nisy vehivavy anankiray nalaza ho mpanota tao amin’ilay tanàna. Fantatr’io vehivavy io fa nandry ilika nisakafo tao an-tranon’ilay Fariseo i Jesosy, ka nitondra tavoahangy vatosanga+ nisy menaka manitra izy. 38 Nankeo ivohon’i Jesosy teo an-tongony izy, ary nitomany ka kotsan’ny ranomasony ny tongotr’i Jesosy, izay nohamaininy tamin’ny volon-dohany. Nanorokoroka sy nanisy menaka manitra ny tongotr’i Jesosy izy. 39 Rehefa nahita izany ilay Fariseo nanasa azy, dia niteny anakampo hoe: “Raha mpaminany+ ity, dia ho nahalala hoe iza io mikasika azy io, ary karazam-behivavy toy inona. Tokony ho fantany fa mpanota io.”+ 40 Izao anefa no navalin’i Jesosy azy: “Ry Simona, manan-kolazaina aminao aho.” Dia hoy izy: “Lazao àry, Mpampianatra ô!” 41 “Nisy roa lahy nananan’olona trosa. Ny an’ny anankiray denaria+ dimanjato fa ny an’ny anankiray kosa dimampolo. 42 Rehefa tsy nanan-kaloa ireo, dia namela+ tanteraka ny trosan’izy roa lahy izy. Koa iza amin’izy roa lahy àry no ho tia azy bebe kokoa?” 43 Namaly i Simona hoe: “Ataoko fa ilay namoizany bebe kokoa.” Dia hoy izy: “Marina ny anao.” 44 Dia nitodika tany amin’ilay vehivavy izy, ka nanao tamin’i Simona hoe: “Hitanao io vehivavy io? Niditra tato an-tranonao aho, nefa tsy nanome rano+ ahy hanasana ny tongotro ianao. Fa io vehivavy io kosa nahakotsa ny tongotro tamin’ny ranomasony, ary nanamaina izany tamin’ny volon-dohany. 45 Ianao tsy nanoroka+ ahy, nefa io vehivavy io tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatramin’ny nidirako tato. 46 Ianao tsy nanisy menaka ny lohako,+ nefa io vehivavy io nanisy menaka manitra ny tongotro. 47 Noho izany, dia lazaiko aminao fa voavela ny helony,+ na dia betsaka aza, satria be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin’ny kely, dia kely fitiavana.” 48 Koa hoy izy tamin-dravehivavy: “Voavela ny helokao.”+ 49 Ary niteny anakampo ireo nandry ilika niara-nisakafo taminy hoe: “Fa iza àry io no mamela heloka?”+ 50 Hoy anefa izy tamin-dravehivavy: “Ny finoanao no efa namonjy anao.+ Mirary soa ho anao aho.”+
^ Na: “ny vokany.”